नेपालबाट दैनिक साढे सात करोडको बिजुली भारत निर्यात ! - Laltin Media
Home»इकोनोमी»नेपालबाट दैनिक साढे सात करोडको बिजुली भारत निर्यात !
नेपालबाट दैनिक साढे सात करोडको बिजुली भारत निर्यात !
नेपालले दैनिक करिब साढे सात करोड रुपियाँको विद्युत् भारत निर्यात गर्न सुरु गरेको छ । बुधबार रातिदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज (आईआईएक्स)मा नेपालका पाँच आयोजनाको कुल ३१२ मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरेको हो ।
त्रिशूली र देवीघाट जलविद्युत् आयोजनाको बिजुली जेठ १८ गते रातिदेखि औसत भारतीय सात रुपियाँ ३० पैसामा पठाउन थालिएको थियो । मङ्गलबार मध्य रातिदेखि मस्र्याङ्दीको ६७ मेगावाट र बुधबार रातिदेखि मध्य मस्र्याङ्दीको ६८ मेगावाट बिजुली पनि निर्यात गर्न थालिएको हो । प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईका अनुसार निजी क्षेत्रको लिखु–४ जलविद्युत् आयोजनाको ५२ मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ ।
प्री–मनसुन सक्रिय भएसँगै वर्षात् बढेकाले नदीनालामा पानी बहाव बढ्दा चाहिनेभन्दा विद्युत् धेरै उत्पादन हुन थालेपछि भारत निर्यात थालिएको हो । प्राधिकरणले खुला बोलकबोलबाट पनि दुई सय मेगावाट विद्युत् भारतका अन्य खरिदकर्तालाई बिक्री गर्न प्रक्रिया थालेको छ ।